डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी - कान्तिपुर समाचार
भ्रष्टाचार देशको प्रमुख राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखापर्दै आएको छ । यो रोग एक किसिमले नेपालको अर्थराजनीतिमा सुनामीजस्तो बढेर जानथालेको अनुभूति जनतालाई हुनथालेको छ । देशमा आर्थिक विकास कमजोर हुनुका साथै भ्रष्टाचारको कुचक्रको ब्यापकता अब निराशलाग्दो यथार्थका रूपमा देखापरेको छ ।
केही दिनअघि युवराज पाण्डे नामका कृषि उद्यमीले पत्रकार सम्मेलन गरे । त्यहाँ दिइएको विवरण अनुसार पाण्डेले नेपाल सरकारको प्रेरणा र कृषिको प्राविधिक सहयोगमा घर धितोमा राखी ऋण लिई डेढ करोडको माछा योजना सुरु गरे । योजना उत्पादनको दृष्टिले सफल छ ।
बाढी र पानीको अर्थ राजनीति
नेपालीहरू अहिले बाढी—पहिरोबाट त्रसित र पीडित छन् । तराई—मधेसका महत्त्वपूर्ण सहरी क्षेत्र डुबानमा परेका छन् भने खोला किनारमा मापदण्ड विपरीत अनियन्त्रित तरिकाबाट घर बनाउन दिने भ्रष्टाचारको संरचनाको मारमा राजधानी परेको छ ।
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीका लेखहरु :
‘स्मार्ट सिटी’ को रन्को
अचेल केही समयदेखि ‘स्मार्ट सिटी’ शब्दको प्रयोग निकै बढेको छ। सायद सबभन्दा चल्तीमा आएका शब्द हुन् : स्मार्ट फोन र स्मार्ट सिटी।
जुनसुकै यथार्थताभित्र त्यसलाई चालु राख्ने बुझाइ या वृत्तान्त जरुरी रहन्छ । सायद यसको राम्रो उदाहरण सिनेमामा देखिन्छ । त्यहाँ एउटा नायक हुन्छ । ऊ गरिब हुन्छ, तर दु:ख गरेर पढ्छ, समाजसँग संघर्ष गर्छ, बीचमा प्रेममा फँस्छ र अलि अगाडि खलनायकसँग भिडन्त गर्छ र विजयी भएर आउँछ ।
माथिल्लो तहमा राज्य सम्पत्तिमा लुट र भ्रष्टाचार नेपालको आर्थिक विकास र आम नेपाली जनताको उन्नतिको बाटोमा एउटा मूल अवरोधको रूपमा देखापरेको छ ।
कमजोर धरातलको दिगो विकास
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै सात प्रतिशत पुगेको छ र धेरैका लागि यसले नयाँ उत्साह ल्याएको छ । मैले बारम्बार अब नेपाल–चीन र भारतको जस्तो दिगो आर्थिक विकासको राजमार्गमा कुदेको सुनेको छु । यो हुन नसक्ने होइन ।